Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.2 Manaova fanandramana manokana
Fanorenana ny fanandramana ny mety ho lafo vidy, nefa dia hanampy anao mba hamorona ny fanandramana izay tianao.
Ankoatra ny fametrahana fanandramana an-tampon'ny tontolo iainana ankehitriny, dia afaka manangana ny fanandramanao manokana ihany koa ianao. Ny tombontsoa lehibe amin'ity fomba fiasa ity dia ny fifehezana; Raha manorina ny fanandramana ianao dia afaka mamorona ny tontolo iainana sy ny fitsaboana tianao. Ireo tontolo iainan'ny fanandramana dia afaka mamorona fotoana ahafahana mandinika ny teoria izay tsy azo tsinontsinoina amin'ny tontolo iainana voajanahary. Ny tsy fahombiazan'ny fanorenana ny fanandramanao manokana dia ny mety ho lafo ary ny tontolo iainanao afaka mamorona dia mety tsy hanana ny tena zava-misy eo amin'ny rafi-pitantanana voajanahary. Ireo mpikaroka hanorina ny fanandramana manokana dia tsy maintsy manana tetikady ho an'ny mpandray anjara. Rehefa miasa ao amin'ny rafitra efa misy, ireo mpikaroka dia tena mitondra ny fanandramana amin'ireo mpandray anjara. Saingy rehefa manamboatra ny fanandramany manokana ny mpikaroka, dia mila mitondra azy ireo izy. Soa ihany, ny serivisy tahaka ny Amazon Mechanical Turk (MTurk) dia afaka manome mpikaroka fomba iray ahafahana mitondra ny mpandray anjara amin'ny fanandraman'izy ireo.
Ohatra iray mampiseho ny hatsaran-toetran'ny tontolon'ny fitsapam-pahaizana momba ny fitsapana ny sekta mampiavaka ny fanandramana nomerika nataon'ny Gregory Huber, Seth Hill, ary Gabriel Lenz (2012) . Ity fanandramana ity dia mitaky fetra azo tsapain-tanana amin'ny fampiharana ny fitantanam-panjakana demokratika. Ny fikarohana tsy fanao amin'ny fanandramana momba ny fifidianana marina dia nanolo-kevitra fa tsy afaka manombana tsara ny fampisehoana ireo mpanao politika ankehitriny ireo mpifidy. Ireo mpifidy dia toa mijaly noho ny antony telo: 1) mifantoka amin'ny zava-bitany fa tsy kumulative; (2) afaka manipi-dālana amin'ny alalan'ny fampihorohoroana, fametahana, ary ny fivarotana; ary (3) dia mety hisy fiantraikany amin'ny fisehoan-javatra tsy misy ifandraisany amin'ny zava-bita tsara indrindra, toy ny fahombiazan'ny ekipa fanatanjahan-tena ao an-toerana sy ny toetrandro. Tao anatin'ireo fandalinana natao teo aloha ireo anefa, sarotra ny nanavaka ny iray tamin'ireo antony ireo tamin'ny zavatra hafa rehetra nitranga tany amin'ny fifidianana marina sy diso. Noho izany, i Huber sy ireo mpiara-miasa dia namorona fifanakalozan-kevitra tena tsotra mba hisorohana, ary avy eo dinihina amin'ny fomba fijeriny, ny tsirairay amin'ireo antony telo ireo.
Rehefa mamaritra ny fananganana fanandramana etsy ambany aho, dia ho toy ny artificial tena izy, saingy tadidio fa ny tena zava-misy dia tsy tanjona amin'ny fanandraman'ny laboratoara. Ny tanjona dia ny manavaka mazava tsara ny dingana izay ezahanao hianatra, ary indraindray dia tsy azo tanterahina izany fisarahana izany amin'ny fianarana miaraka amin'ny zava-misy kokoa (Falk and Heckman 2009) . Ankoatr'izay, raha ny marina, ireo mpikaroka dia nanamafy fa raha tsy afaka manombana ny fahombiazan'ny mpifidy ao anatin'ity sehatra goavana ity ny mpifidy, dia tsy afaka ny hanao azy io amin'ny toe-javatra iainana kokoa sy sarotra kokoa.
Nampiasain'i MTurb sy mpiray asa aminy ireo mpandray anjara. Indray mandeha ny mpandray anjara dia nanome fandeferana voamarina ary nandalo fitsapana fohy, nilazana izy fa nandray anjara tamin'ny lalao 32-taona mba hahazoana mari-pankasitrahana izay mety ho niova ho vola be. Tany am-piandohan'ny lalao, ny mpandray anjara tsirairay dia nilazana fa izy dia nomena "mpanome" izay hanome ny mari-pamantarana maimaimpoana isan-karazany ary ny mpamatsy trano sasany dia malaza kokoa noho ny hafa. Ankoatra izany, ny mpandray anjara tsirairay dia nilazana ihany koa fa mety hanana fahafahana izy na hitazona ny mpanome azy na hametraka azy vaovao iray aorian'ny faha-16 taonan'ny lalao. Raha jerena ny zavatra fantatrao momba ny tanjona mpikaroka ao Huber, dia hitanao fa manondro governemanta ny mpanome alalana ary misafidy fifidianana izany, saingy tsy nahafantatra ny tanjona ankapoben'ny fikarohana ny mpandray anjara. Amin'ny ankapobeny, Huber sy ireo mpiara-miasa dia nanangona mpandray anjara 4000 izay nandoavana $ 1.25 ho an'ny asa iray izay naharitra valo minitra.
Tsarovy fa ny iray amin'ireo fikarohana avy amin'ny fikarohana taloha dia ny valim-pifidianana no manome valisoa sy manasazy ireo mpifidy amin'ny vokatra izay tsy misy fanaraha-maso azy, toy ny fahombiazan'ny ekipa fanatanjahan-tena ao an-toerana sy ny toetrandro. Mba hanombanana raha mety hisy fiantraikany amin'ny fisehoan-javatra mifandraika amin'ny mpilatsaka an-tsehatra ny mpandray anjara amin'ny sehatr'izy ireo, i Huber sy ireo mpiara-miasa dia nanampy lottery ho an'ny rafitra fanandramana. Na tamin'ny fihodinana faha-8 na ny 16 taonany (izany hoe, teo alohan'ny fahafahana hisolo ny mpandrindra) ny mpandray anjara dia napetraka tao amin'ny lottery iray izay nahazoana loka 5,000, ny sasany nahazo 0, ary ny sasany 5,000. Ity loteria ity dia natao hanasongadinana vaovao tsara na ratsy izay tsy miankina amin'ny fampisehoana ny mpanao politika. Na dia nilaza aza ny mpandray anjara fa tsy misy ifandraisany amin'ny fanatanterahana azy ireo ny loteria, dia mbola nisy fiantraikany tamin'ny fanapahan-kevitry ny mpandray anjara ny vokatr'ilay loterina. Ireo mpandray anjara izay nandray soa avy tamin'ny loteria dia mety hitazona ny mpamatsy azy, ary nihanatanjaka io vokatra io raha niseho tamin'ny 16 taona teo aloha ilay loterina talohan'ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra - noho ny nitranga tamin'ny 8 (4.15) izany. Ireo vokatra ireo, miaraka amin'ireo fanandramana hafa ao anatin'ilay taratasy, dia nitarika an'i Huber sy ireo mpiara-miasa mba hanatsoaka hevitra fa na dia amin'ny sehatra tsotra aza, dia sarotra amin'ny mpifidy ny manao fanapahan-kevitra hendry, vokatra iray izay niantraikany tamin'ny fikarohana amin'ny ho avy momba ny fanapaha-kevitra momba ny fifidianana (Healy and Malhotra 2013) . Ny fanandramana an'i Huber sy ireo mpiara-miasa dia mampiseho fa ny MTOUR dia azo ampiasaina hamerina ny mpandray anjara amin'ny fanandramana fanandramana amin'ny laboratoara mba hizaha testes mazava tsara. Mampiseho ihany koa ny lanjan'ny fananganana ny tontolo iainana iainanao manokana: Sarotra ny mieritreritra ny fomba mety hiparitahana ireo fomba ireo toy izany amin'ny toerana hafa.
Sary 4.15: Valin'ny Huber, Hill, and Lenz (2012) . Ireo mpandray anjara izay nandray soa avy tamin'ny loteria dia mety hitazona ny mpamatsy azy, ary nihanatanjaka io vokatra io raha toa ka nisy ny loteria tamin'ny 16 taona teo aloha teo alohan'ny fanapahan-kevitry ny fiovàna - toy izay nitranga tamin'ny manodidina ny 8. Nifanaraka tamin'ny Huber, Hill, and Lenz (2012) , tarehimarika 5.
Ankoatra ny fanandramana fanandramana laboratoara, ireo mpikaroka dia afaka manamboatra fanandramana izay sahala bebe kokoa. Ohatra, Centola (2010) namorona fanandramana nomerika nomerika mba hianatra ny vokatry ny rafitra tambajotra sosialy amin'ny fihanaky ny fihetsika. Ny fanontaniana napetrak'izy ireo dia nitaky azy hitazona ny fitondran-tena mihatra amin'ny vahoaka izay manana rafitra tambajotra sosialy samihafa saingy tsy azo lavina. Ny hany làlan-tokana hanaovana izany dia tamin'ny alalan'ny experimenta, fanandramana natsangana. Anatin'ity tranga ity, i Centola dia nanangana tranonkala ara-pahasalamana.
Nandray mpandray anjara tamin'ny 1500 i Centola tamin'ny alàlan'ny dokam-barotra momba ny tranokalan'ny fahasalamana. Rehefa tonga tao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ny mpandray anjara - antsoina hoe Healthy Lifestyle Network - dia nanome fanekena azy ireo izy ireo ary nomena "mpitsabo amin'ny fahasalamana" avy eo. Noho ny fomba nanampian'i Centola an'ireo mpitsabo ireo, dia afaka nampifangaro ny rafitra tambajotra sosialy izy vondrona samihafa. Ny vondrona sasany dia natsangana mba hananana tambajotra tsy miankina (izay mety hampifandray azy rehetra), raha toa kosa ny vondrona hafa dia naorina mba hananana tambajotram-piarahamonina (izay misy ny fifandraisana eo an-toerana). Avy eo, nampiditra fihetsika vaovao ho an'ny tambanjotra tsirairay i Centola: ny fahafahana misoratra amin'ny tranonkala iray vaovao miaraka amin'ny fampahalalam-baovao fanampiny. Na oviana na oviana no nisoratra anarana ho an'ity vohikala vaovao ity, naharay mailaka nanambara ity fihetsika ity ireo mpitsabo azy ireo. I Centola dia nahatsikaritra fa ity fitondran-tena ity-manasonia ny tranokalam-baovao-dia niely haingana sy haingana kokoa noho ny tambajotra tsy miankina, fitadiavana izay mifanohitra amin'ny teoria sasany.
Amin'ny ankapobeny, ny fanorenana ny fanandramanao manokana dia manome anao fifehezana bebe kokoa; Izany dia ahafahanao manorina ny tontolo mety tsara indrindra hanokafana izay tianao hianarana. Sarotra ny maka sary an-tsaina ny mety ho nataon'ireo fanandramana roa azoko natao tany amin'ny tontolo efa misy. Ankoatr'izay, ny fananganana ny rafitrao manokana dia mampihena ny ahiahin'ny olona amin'ny fanandramana amin'ny rafitra efa misy. Rehefa manamboatra ny fanandramanao manokana anefa ianao, dia mihazakazaka amin'ny olana maro izay tratran'ny fanandramana ataon'ny laboratoarana: mamerina ny mpandray anjara sy ny ahiahiny momba ny zava-misy. Ny tsy fahatomombanana farany dia ny fananganana ny fanandramanao manokana dia mety ho lafo sy mandany fotoana, na dia hita ihany aza fa ny fanandramana dia mety amin'ny sehatra tsotra (toy ny fandalinana ny fifidianana an'i Huber, Hill, and Lenz (2012) ). ho an'ny tontolo sarotra azo Centola (2010) toy ny fandalinana ny tambajotra sy ny Centola (2010) ).